krishna bahadur mahara | Ratopati
उच्च अदालतबाट थुनामुक्त होलान् कृष्णबहादुर महरा ? access_timeपुस ३, २०७६
काठमाडौ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालत पाटनमा दिएको पुनरावेदनको आज सुनुवाइ हुँदैछ । जर्वजस्ती बलात्कार प्रयास आरोपमा आफूलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको निर्णयविरूद्ध महराले पुनरावेदन गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनका मुख्यन्यायाधीश ...
महरा प्रकरण : थुनामै राख्नुपर्ने कारणको कैफियत कागजात झिकाउन उच्च अदालतको आदेश access_timeमंसिर ६, २०७६
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामा पठाउनुपर्ने कारणको कैफियत कागजात जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट माग गरेको छ । शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशले महरालाई थुनामा पठाउनुपर्ने कारणबारे जान्न जिल्ला अ...
पीडित र साक्षीले किन फेर्छन् बयान ? access_timeकात्तिक २७, २०७६
अङ्ग्रेजीमा होस्टाइल भन्ने एउटा शब्द छ । अदालती प्रक्रियामा चल्तीमा रहेको यो शब्द नेपाली समाजमा भने त्यति चलेको शब्द होइन । अक्सफोर्ड डिक्सनरी पल्टाउने हो भने होस्टाइलको अर्थ विरोधी वा प्रतिकूल भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर कानुनी भाषा र अर्थमा होस्टाइलको अर्थ प्रतिकूल बया...
महरा प्रकरणमा प्रहरीको कमजोरी : घटनास्थल किन सुरक्षित राखिएन ? access_timeकात्तिक १७, २०७६
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध दायर भएको जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा धेरै त्रुटी रहेको देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले पेश गरेको प्रतिवेदनमा घटनास्थल सुरक्षित गरेका भनिएपनि घटनास्थल मुचुल्का उठाउँदासम्म पनि सुरक्षित...
महराको पक्षमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र बारका पूर्वअध्यक्ष access_timeकात्तिक १७, २०७६
काठमाडौँ । जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दा खेपिरहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको पक्षमा बहस गर्न करिब २० जना वकिलहरुले वकालतनामा पेश गरेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँ स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार महराको पक्षमा बहस गर्न पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नेत...
महरा प्रकरणमा थुनछेक बहस : के हुँदैछ आज ? access_timeकात्तिक १७, २०७६
काठमाडौँ । जवर्जस्ती करणी उद्योग प्रयासको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको आइतबारबाट थुनछेक बहस सुरु हुँदैछ । थुनछेक बहस सकिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटी लिएर छोड्ने वा सामान्य तारेखमा रिहा गर्नेमध्ये एक आदेश हुनेछ । तर, बहसमा ध...
त्यो दिन डेढ घण्टा कहाँ हराएका थिए महरा ?: सुरक्षाकर्मीसँग महराको बयान बाझियो access_timeकात्तिक १५, २०७६
काठमाडौँ । बलात्कार प्रयासमा आरोपित निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा गत असोज १२ गते साँझ करिब डेढ घण्टा कहाँ थिए भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिँदै महराले आफू त्यसदिन पीडित महिलाको कोठामा नगएको दावी गरेका छन् । तर त्यसदिन सभामुख...
यस्ता छन् महराविरुद्धको अभियोग पुष्टि गर्न प्रस्तुत सबुद प्रमाण र १५२ थान कागजात access_timeकात्तिक १५, २०७६
काठमाडौँ । निवर्तमान सभामुखकृष्णबहादुर महराविरुद्ध जर्वजस्ती करणी उद्योग अन्तरगत सजायसहितको माग दावी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यलयले अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा ५ वटा सबुद प्रमाणसहित घटनासँग सम्बन्धित १५२ वटा कागजपत्र प्रमाणका रुपमा पेश गरेको छ । सरकारी वकिलको ...
श्रीमतीले फुटाइदिएकी थिइन् महराको मोबाइल ! access_timeकात्तिक १५, २०७६
काठमाडौँ । संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा पक्राउपछि मुद्दा चलाइएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रयोग गर्ने गरेको मोवाइल फोन घटनाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि उनकी श्रीमती सीता महराले फुटाइदिएको बयान दिएकी छन् । उनले मोवाइ...
महराको बयान : ‘हार्ड ड्रिङ्स’ सेवन गर्दिनँ, फोन नउठेपछि घरभित्र छिरिनँ access_timeकात्तिक १५, २०७६
काठमाडौं । बलात्कार प्रयासको आरोपित निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष बयान दिँदै आफूमाथि लगाइएको आरोपमा सत्यता नरहेको बताएका छन् । रातोपाटीलाई प्राप्त अभियोगपत्रमा महराले सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष दिएको बयानको लिखित विवरण उल्लेख छ ...
न्यायाधीश पाण्डेको एकल इजलासमा महराको बयान शुरु access_timeकात्तिक १५, २०७६
काठमाडौँ– बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको बयान सुरु भएको छ । शुक्रबार काठमाडौँको बबरमहलस्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवर्तमान सभामुख महराको बयान सुरु भएको हो । महरामाथि संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्क...
महरालाई आज अदालतमा उपस्थित गराइँदै access_timeकात्तिक १४, २०७६
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बिहिबार काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित गराइँदैछ । सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेपछि आजबाट महराको थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । त्यसपछि उनलाई धरौटीमा छोड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइने भन्नेबारे निर्णय हुने बताइए...
महरालाई पुनः अदालत लगिँदै access_timeकात्तिक ३, २०७६
काठमाडौँ । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुनः म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत लगिने भएको छ । थपिएको समयमा पनि अनुसन्धान पूरा नभएपछि महरालाई अदालत लगिन लागेको हो । जबरजस्तीकरणी उद्योगको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले २८ असो...
कृष्णबहादुर महरा अस्पताल भर्ना access_timeअसोज २३, २०७६
काठमाडौँ । निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अस्पताल भर्ना भएका छन् । प्रेसरको समस्या देखिएपछि महरालाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको हो । प्रेसरमा समस्या देखिएपछि महरालाई अस्पताल भर्ना गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सु...
रोशनी शाहीको उजुरीपछि अब यसरी पक्राउ पर्न सक्छन् महरा access_timeअसोज १८, २०७६
काठमाडौं– निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीले प्रहरीमा उजुरी दिएसँगै महरा पक्राउ पर्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासकै हाइप्रोफाइलको यो स्क्यान्डलका कारण महर...